हामी कुनै पनि शर्तमा अहिलेको ओली सरकार कम्जोर पार्न चाहदैनौ: प्रचण्ड [विशेस कुराकानी भिडियो]::Nepal's No.1 Genuine Online News Portal
”दुई बाम पार्टीको एकता भ्रान्ति हैन बरु मुलुकलाई समाजबादतिर लाने बाटो हो !”
प्रकाशित मिति - मङ्ल, जेष्ठ ८, २०७५
ससस्त्र १० बर्षे जनयुद्धका सर्बोच्च कमान्डर, नेकपा माओबादी पार्टीका अध्यक्ष, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादीका अध्यक्ष र अन्तिममा उही पार्टी तर फरक नाम अर्थात् माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०७५ ज्येस्ठ ३ गतेदेखि पुष्पकमल दाहालमात्र भएका छन् । किनकि अब उनलाई “प्रचण्ड” को आवश्यता नै छैन । दुई बाम पार्टी माओबादी केन्द्र र एमालेको एकतापछि दाहाल र ओली समान रुपमा अध्यक्ष भएका छन । बिशौं हजार नेपाली आमाका सन्तानहरुको बलिदानको धरातलमा टेकेर गणतान्त्रिक मुलुकको पहिलो प्रधान मन्त्री समेत भएका दाहाललाई माओबादी केन्द्रलाई एमालेमा बिलय गराउने त्यस्तो के आपत वा बाध्यता आइलाग्यो ? यो आम जनमानसको मन मस्तिष्कमा उब्जिरहेको प्रश्न हो । जब जनयुद्धको मूल्य र मान्यतालाई लत्याउनु नै थियो भने जनयुद्ध गर्नु पर्ने आबश्यकता नै किन पर्यो त ? आज हरेक नेपालीले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन तर नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्डरलाइनका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के भन्छन त ? कान्तिपुर टेलिविजनसंग कुरागर्दै दाहाल भन्छन-
प्रचण्डको यात्रा क्रान्ति: गन्तब्य भ्रान्ति भन्ने तपाईले बनाउनु भएको नारा मलाइ ठिक लागेन बरु यात्रा क्रान्ति: शान्ति र समृद्धि भन्नु भएको भए ठिक हुने थियो ।
म के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने चाहे प्राकृतिक कुरा हुन, चाहे राजनीतिक वा सामाजिक घटनाका कुरा नै किन नहुन, ती एकै नासका हुदैनन्. ती सुधार र गुण दुवै रुपमा हुन्छन । जब नेकपा एमालेको जन्म हुँदै थियो र माओबादी केन्द्रको जन्मको अवस्था हेर्नु भयोभने एउटा ज्यादै नै उग्र र हतियार उठाइरहेको थियो भने अर्को सुधारवादी, संशोधनाबादी र भ्रन्तिको आरोप चलिरहेको थियो । अर्को एक दशक एकापसमा रुपान्तरणको स्थिति आएको जस्तो देखिन्छ । एमाले माओबादी भएजस्तो, माओबादी एमाले भएजस्तो देखिन्छ । एक दशक एक अर्कालाई आरोप लगाउने गरियो र अर्को जनयुद्धको दशक रह्यो । यो अनौठो हैन, परिवर्तनको प्रक्रियासंगै भएको छ ।
“नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने दाहालको चाहना यस्तो छ !”
२००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुँदा क्रान्तिकै कुरा गरिएको छ र निश्चित परिस्थितिमा बल प्रयोगकै कुरा गरिएको छ. कम्युनिस्टहरुको मात्रै कुरा हैन, बीपीकै नेतृत्वमा पनि हतियार त् उठाएकै हो । आफूलाई सबैभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक ठान्ने पार्टीले पनि, कम्युनिस्टहरुको भन्दा भिन्न सिद्धान्त बोकेर हिन्नेहरुले पनि नेपालमा हतियार उठाएको उदाहरण छ । २००७ सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा पनि सशश्त्र क्रान्तिकै तरिकाले पनि नयाँ गोरेटोतिर लान सकिने अवस्था छ त्यसैले अब हामी समाजबादतिर जाने हो, हामी समृद्धि तिर लाग्ने हो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको अन्तरास्ट्रिय आन्दोलन हो तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको राष्ट्रिय आयाम पनि हुन्छन. संसारभरी जहाँ पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन वा बहस भए त्यसको धेरथोर प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । मार्क्सबादलाई विज्ञानको रुपमा स्थापित गर्न मार्क्सले जुन प्रयास गर्नु भयो उहाँ रिजिड भएर एउतै कुरामा टाँसिएर बस्नु भएन ।
नेपालको कम्युनिज्म पनि सत्तासंगे जोडिएको छ । सत्ता बाहेक अरु सबै इल्युजन हुन्छ भन्ने हुन्छ. सत्ता र क्रान्ति एकै किसिमले हुन्छ भनेर मार्क्सले पनि भनेका छैनन् । लेनिनले त् क्रान्ति देश काल परिस्थिति अनुसार हुन्छ भनेर भनेका छन् । त्यसैले हरेक देशमा क्रान्तिको एउटा मोडेल हुन्छ भन्ने हुदैन । नयाँ नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने सोंचमा छौं ।
नेपालको जनमत कम्युनिस्टप्रति अत्याधिक छ । अत्याधिक जनमत कम्युनिस्टप्रति केन्द्रिकृत छ. हामीले कसैको पनि कपि गरेका छैनौ. हामीकहाँ जुन लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक सिष्टम छ त्यो कम्युनिस्टहरुले लडाई गरेर प्राप्त गरेको सिस्टम हो । नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र जे आयो ती सबै कम्युनिस्टहरुले नै बलिदान गरेर आएको हो । त्यसैले क्युबा वा भेनेजुएलामा जस्तो यहाँ मासाकार हुन् सक्दैन ।
शान्ति प्रक्रियामा आउँदा होस्, सेना समायोजनको कुरामा होस् वा हतियार ब्यबस्थापनको कुरा गर्दा होस् केही साथीहरु परम्परागत किसिमले नै जाउँ भन्ने पनि थिए । मैले आजै सेना समायोजना गर्नु पर्छ । भोलि भन्यौं भने नेपालमा ठूलो दूर्घटना हुन् सक्छ, प्रत्येक क्यान्टोन्मेन्टमा मानिस मारिन सक्छन भनेर मैले बुझिसकेको थिए ।
पार्टी एकता ३ गते नै गर्नुपर्छ त्यो भन्दा अघि पनि पार्टी एकता गर्न सकिने अवस्था थिएन र त्यो भन्दा पछी गर्दा पनि ढिलो हुन सक्ने स्थिति थियो. त्यसैले सही समयमा सही काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । त्यसैले दुई बाम पार्टीको एकता भ्रान्ति हैन बरु समाज र राष्ट्रलाई पनि समृद्धितिर लाँदै समाजबाद्तिर जाने बाटो हो । पार्टी एकतापछि म दोश्रो बरियतामा परें भनेर भाबुक भएको हैन ।
प्रचण्डको भित्रि त्रासको कारणले पार्टी एकता भयो भन्ने कुरा बिल्कुल हैन । मभित्र सशश्त्र आन्दोलनको त्रास रत्तिभर पनि छैन भन्ने कुराको प्रतिक नै दुई पार्टीको एकता हो । जनयुद्धको एजेन्डालाई छाडेको हैन बरु जनयुद्धलाई संघीय गणतन्त्रमा परिवर्तन गरेर आफ्ना एजेन्डा राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा हेर्ने हामीलाई गौरब प्राप्त भयो भनेर किन नहेर्ने ?
दुई पार्टी मिलेर एउटा भएको स्थितिमा पार्टी चलाउने मान्यता अनुसार जरुरी अनुसार प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष फेरेर जान सकिन्छ, हिजोका दिनमा यस्तो भनियो भनेर हुँदैन । अब पार्टीले निर्णय गरेर जान्छ, देशमा अस्थिरता हुने दिदैन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोटेट हुनुपर्छ भन्ने छैन । हामी कुनै पनि शर्तमा सरकार कम्जोर पार्न चाहदैनौ र पार्टीलाई अस्थिर बनाउन चाहदैनौ ।
नेपाललाई तीब्र गतिमा विकास र समृद्धिको बाटोमा लाने मेरो प्रबल इच्छा छ त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी हुनुपर्छ उसले मात्र यो देशलाई गति दिन सक्छ भन्ने मलाइ लाग्छ। प्रस्तुति- अजय बिश्वाश
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विचार सबै जान्नका लागि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्